DEG DEG: Fal NAXDIN leh oo ka dhacay Muqdisho // 8 Ruux oo dhintay |
DEG DEG: Fal NAXDIN leh oo ka dhacay Muqdisho // 8 Ruux oo dhintay
Penegra no rx, cheap lioresal. Ugu yaraan 8 Ruux ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 30 Ruux dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii Shil Qasaaro geystay uu ka dhacay Degaanka Ceelasha Biyaha Duleedka Magaalada Caasimada ee Muqdisho.
Shilkan ayaa waxuu ka dambeeyay kadib markii ay isku dhaceen Labo Gaari oo ka kala yimid Magaalada Muqdisho iyo Degmada Afgooye ee Gobolka Sh.Hoose waxaana ku dhintay ku dhawaad 8 Ruux iyadoona dhaawaca lagu tilmaamay 30 kale.
Ibraahin Maxamed Guuleed oo ah Guddoomiyaha deegaanka Lafoole oo la hadlay Garoowenews Online ayaa sheegay in Shilka uu mid aad u Qasaaro badan waxuuna intaa ku daray in ay socdaan samatabixinta Dadka dhaawacmay.
Waxuu sidoo kale Guddoomiyaha tilmaamay in dhaawaca ka dhashay Shilka intooda badan loo soo qaaday Isbitaalada Magaalada Muqdisho, gaar ahaan Isbitaalka Madiina ee Degmada Wadjid.
Sikastaba, Shilkan ayaa ahaa midkii ugu Qasaaraha badnaa ee ka dhaca Duleedka magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya Iyadoona Shilalka inta badan loo aaneeyo Dareewalada aan wax Xil ah iska saarin ka xeynta Gaadiidka.